Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Onye nrụpụta kacha mma nke ụlọ ịsa ahụ
Ụlọ ịsa ahụ bụ otu n'ime ebe kachasị mkpa n'ụlọ ọ bụla. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ezu ike n'ebe ahụ ma nwee ike inwe mmetụta adịghị ike. Ọ bụ ya mere oghere a ga-eji dị mma, dị mma na nkecha.
Ihe ọ bụla n'ebe ahụ kwesịrị ịbụ okomoko. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ imezigharị ma chọọ ihe dịka ọnụ ahịa ọnụ ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ ihe kachasị mma maka ebe a na-asa ákwà, anyị na-akwado ka ị lekwasị anya na Aquatica.
Kedu ihe bụ Aquatica?
Aquatica bụ otu n'ime ụlọ ahịa ịsa ahụ ịsa ahụ kachasị ntụkwasị obi n'ịntanetị yana onye nrụpụta ahụmịhe nke ihe niile dị mkpa nke ụlọ ịsa ahụ. Ha na-achịkọta ndị otu kacha mma nke ndị injinia nwere nkà, ndị na-emepụta ihe, na ndị omenkà ka ha rụpụta ngwa ụlọ ịsa ahụ kacha mma. E hiwere ha na Canada, mana ụlọ ọrụ ha niile dị na mba Europe. Ị nwere ike ịjụ ihe kpatara ị ga-eji họrọ ụlọ ọrụ a karịsịa. Azịza ya dị mfe:
ha bụ ndị a ma ama nke na-emepụta ihe dị iche iche maka ụlọ ịsa ahụ
ha nwere ọtụtụ patent na teknụzụ na ihe ndị dabara na ihe ọ bụla siri ike chọrọ nke ndị nwe njikwa
ha na-atụ aro akwụkwọ ikike zuru oke na ngwaahịa ha ruo afọ 25
ha na-akwụwa aka ọtọ na ndị ahịa na-adịghị arịọ maka ọzọ ịkwụ ụgwọ
ha nwere ọtụtụ nyocha dị mma sitere na ndị na-azụ ahịa n'ezie na nyiwe dị iche iche
Ụlọ ọrụ nkwado ha nwere ike inyere gị aka dozie nsogbu ọ bụla na ọkachamara na ngwa ngwa
Ndepụta a nke uru Aquatica ezughị ezu, mana o kwesịrị iji mee ka obi sie gị ike na ụlọ ọrụ a bụ onye ndu n'ahịa ahịa ịdị ọcha nke okomoko.
Kedu ụdị ngwaahịa maka ụlọ ịsa ahụ ị nwere ike ịzụta na Aquatica?
Ngwakọta ngwa ahịa Aquatica dị oke mma. Ị nwere ike ịhọrọ n'ụdị dị iche iche:
tubes na-ekpo ọkụ
Aquatica na-enye ụdị dị iche iche, agba, ihe na ihe na-agwụcha maka ihe ọ bụla enwere ike ibu ha. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwongwo si Aquatica chọọ ụlọ ịsa ahụ gị mma, ọ ga-aba uru ọ bụla dime.